Lozam-pifamoivoizana an-tsambo | Law Firms Dubai
Loza amin'ny ratra
Ny sambo fitsangatsanganana dia toy ny tanàna kely mitsingevana ny rano miaraka amin'ireo mpiasa sy mpandeha amin'ny maha-mpivory azy ireo izay misy trano fandraisam-bahiny misy trano, toeram-pialam-boly ary trano fisakafoanana. Saingy, toa ny tanàna hafa, ny sambo andranomasina dia afaka mahatsapa ihany koa ny loza mety hitranga amin'ny ratra, na tsotra izany na mavesatra.
Ny ratra amin'ny sambo Cruise
ny fomba hiatrehana ny raharaha
Eny, ny lozam-pifamoivoizana amin'ny lozabe dia tena fahita ary raha mijaly amin'ny iray ianao dia mila mahafantatra ny fomba hiatrehana ny raharaha amin'ny fomba mety.
mijaly amin'ny ratra?
Fanompoana tafahoatra ny alikaola
Vato miakatra manda
Ny mpiasa dia tsy miraharaha ny fampitandremana sy fangatahana alikaola
Lozam-pifamoivoizana sy ny escalator
Zavatra tsy voatahiry
Ny aretina legionnaire izay karazana fitsaboana miteraka bakteria miparitaka amin'ny dobo mafana sy dobo filomanosana
Karazan-tsindrimandry momba ny maratra amin'ny sambo
Misy karazany samihafa amin'ny fanamboaran-tsambo amin'ny sambo izay mety misy amin'ireto:
Nilatsaka teo amboniny
Mandeha na mianjera na lavo na mianjera
Loza na làlan-dobo
Ny ratra vokatry ny afo teo amin'ny sambo filokana
Naratra nandritra ny fitsangantsanganana teny andaniny
Virus Norwalk na otrikaretina norovirus na aretina maro hafa vokatry ny fepetra tsy manara-penitra na sakafo voaloto
Ny ratra maharitra nandritra ny fialam-boly
Ratra vokatry ny hadisoana tetezamita
Fanafihana ara-batana na firaisana ara-nofo noho ny toerana tsy azo antoka na tsy voaaro
Ny tsy firaharahiana ara-pitsaboana na ny fanararaotana ara-pitsaboana
Loza amin'ny cruise Ship
Mety handratra ny tena sy ny ratra mafy ny sambo mandeha eny ambony sambo. Ny dikan'ny motera dia mety hahatonga ny sambo filanjana na lisitry ny sambo izay mety hitarika amin'ny sambo mandeha anaty rano na milentika mihitsy aza. Ny tsy fahampiana moto dia mety hiteraka mpandeha tavela ao afovoan-dranomasina an-tsambo ihany koa. Mety hamono ny herinaratra amin'ny fantsom-pifandraisana sy fantsom-pifandraisana koa ny sambo. Ny bakteria dia afaka mitarika sakafo raha voakasik'izany ihany koa ny rafitra fitahirizana sakafo.
Ny afo ao amin'ny efitranon'ny motera dia mety hiteraka risika lehibe ho an'ny mpiasa na ny mpandeha. Raha very hery ny sambo manao sambo, dia mety hiafara amin'ny:
Ny doro motera dia ahiahy lehibe ary mety hiteraka olana amin'ireo rafi-pahefana goavana amin'ny herinaratra mihazakazaka ny sambo. Tena zava-dehibe izany satria ny milina mamadika ny propellers dia mamatsy herinaratra ho an'ny rafitry ny herinaratra, ao anatin'izany ny herinaratra amin'ny fandehanan-java-trano fidiovana.
Fahavoazana azo averina amina lozam-pifamoivoizana
Ireo mpandraharaha momba ny sambo sy ny tompona dia mandoa ny mpandeha. Ny tsipika fitsangatsanganana no tompon'antoka amin'ny fanaovana antoka fa tsy misy risika tsy azo ivalozana ao amin'ilay sambo izay mahatonga ny mpandeha hiharan'ny ratra. Ny tsy fanatanterahana ireo andraikitra ireo sy ny fanaporofoana fa ny mpikirakira na ny lalamby dia tsy miraharaha dia afaka mamela anao misoratra noho ny fahavoazana mety ho tratran'ny lozam-pifamoivoizana. Ireo valim-bidy azonao azonao dia misy:
Ny vidin'ny fanarenana ankehitriny sy ho avy
Ny vidin'ny fitsaboana ankehitriny sy ho avy
Ny fahaverezan'ny karama miaraka amin'ny karama amin'ny ho avy tafiditra
Mijaly sy fanaintainana
Ny fangatahana ho faty tsy marina
Ahoana no mety hampiasaina ilay mpisolovava mpiasan'ny sambo iray momba ny lozam-pifamoivoizana?
Noho ny fanampian'ny mpisolovava ny sambo mpisolovava, dia afaka mahazo antoka ianao fa hahazo valim-pananana mety sy azo ekena ho an'ny karazana ratra izay notohizanao nandritra ny sambo. Izy ireo dia afaka mitari-dàlana anao amin'ny fivezivezena ny rano tsy mahazatra amin'ny fametrahana raharaha iray hanoherana ny tompona sambo sy ny mpanararaotra.
mpisolovava manokana na mpisolovava
Fametrahana raharaha iray hanoherana ny tompona sambo sy ny mpaninjara.